Sidee ayaan uga adkaan karaa dambiga ee nolosheyda Kirishtaanka?
Su’aal: Sidee ayaan uga adkaan karaa dambiga ee nolosheyda Kirishtaanka?
Jawaab: Baybalka wuxuu soo bandhigayaa dhoor illo kala duwan ee noo gargaareyso dadaalkeena looga adkaado. Waqtiga noloshaan, marnaba si wanaagsan guul uma gaareyno oo dambiga la xiriirto (1 Yooxanaa 1:8), laakin taasi waa inay hadafkeena noqotaa. Oo ay la jirto caawinta Illaah, iyo adiga oo raacayo mabaad’ida Ereygiisa, si hormar leh ayaan uga adkaan karnaa dambiga oo noqotaa Masiixi aad iyo aad ah.
Isha ugu horeysay ee Baybalka sheegay ee dadaalkeena looga adkaanayo dambiga waa Ruuxa Quduuska. Illaah wuxuu na siiyay Ruuxa Quduuska marka guul ayaan gaari karaa ee nolosha Kirishtaanka. Isbarbardhiga Illaah camalkooda ee dhiiga iyo miraha Ruuxa Quduuska ee ku jiro Galatiya 5:16-25. Mareenkaas waxaa na loo yeeraa xiliga lagu soconayo Ruuxa. Dhammaan aaminayaasha mar hore haysto Ruuxa Quduuska, laakin mareenkaan wuxuu noo sheegayaa waxa aan uga baahannahay inaan uga hadalno Ruuxa, ku qeylinayo xakameyntiisa. Tani waxay la micna tahay doorashada oo si is waafaqsan loo raaco Ruuxa Quduuska ee ku sababayo nololaheena badelkii raacitaanka dhiiga.
Ruuxa Quduuska kala duwan wuxuu sameyn karaa waa muujinyta nolosha Butros, kaas oo, ka hor inta aanan laga buuxin Ruuxa Quduuska, diiday Ciise sadex jeer—iyo midaan kadib wuxuu yiri wuxuu u raacayaa Masiixi dhimashada. Kadib markii lala gudbiyay Ruuxa, wuxuu si furan ula hadlay oo si xoogan Yahuuda joogto Bentakoostiga.
Waxaan ku lugeynay Ruuxa sidA aan isugu daynay inaan ku qanco Ruuxa sababayo (sida ku hadlay 1 Tesaloniika 5:19) iyo raadiyo badelkii in lagu xareeyo Ruuxa (Efesos 5:18-21). Siee ayaa mid loogu buuxiyaa Ruuxa Quduuska? Marka koowaad, waa doorashada Illaah xittaa sida ay aheyd Baybalka Hore. Wuxuu doortay shaqsiyaadka si ay u gaaraan shaqada uu Rabay in la sameeyo iyo lagu gudbiyay Riixiisa (Bilowgii 41:38; Baxniintii 31:3; Tirintii 24:2; 1 Samuu'eel Kowaad 10:10). Waxaa jiro cadeyn ku jirto Efesos 5:18-21 iyo Kolosay 3:16 in Illaah doortay inuu buuxiyo kuwa ku buuxinayo nafsadooda Erayga Illaah. Tani waxay noo hogaamisaa isha labaad.
Erayga Illaah, Baybalka, wuxuu yiri in Illaah uu na siiyay Eraygiisa nalaku qalabeynayo shaqo walboo wanaagsan (2 Timoteyos 3:16-17). Waxay na bartaa sida loo noolaado iyo waxa la aamino, waxay noo sheegtaa marka aan doorano wadooyinka qaldan, waxay nagu caawisaa inaad dib ugu laabano wadada saxan, oo waxay nagu caawisaa inaan wadadaas hayno. Maahmaahyadii 4:12 wuxuu noo sheegayaa in Erayga Illaah uu Noolyahay OO awood leeyahay, u suurtogaleyso inuu qasbao qalbigeena si loo soo saaro oo looga adkaado dambiyada ugu daran ee qalbiga iyo aragtida. Psalmist wuxuu ka hadlay awooda badelka noloshooda ee ku qoto dheer Sabuurradii 119. Joshua waxaa loo sheegay muhiimka lagu guuleysanyo ka adkaanta cadowgiisa ma ahan in la illoobo ishaan laakin badelkii inuu dhexdhaxaadiyo habeen iyo maalin oo cadeeco. Midaan uu sameeyay, xittaa markii waxa Illaah ku amray aysan micno sameynin milatari ahaan, iyo tani waxay aheyd muhiimada guushiisa ee dagaalkiisa ee Dhulka La balan qaaday.
Baybalka waa isha oo aan inta badan ula dhaqano si daciif ah. Waxaan siinaa adeega amniga ee iyada oo u qaadeyno Baybalkeena ee kaniisada ama aqrinta ruuxa ama sadarka maalintii, laakin waAN ku guuldareysanay inaan xifdino, dhexdhaxaadinta, ama u isticmaalida nololaheena; waan ku guuldareysanay inaan qirano dambiyada waxay sheegeysaa ama ammaanaa Illaah ee hadiyadaha ay noo sheegto . Marka ay timaado Baybalka, inta badan la xiriiro ama ku saaabsan. Midkoo waxaan qaadeynaa si ku fillan noogu heyso nolol ruux ahaan ah iyada oo laga cunayo Erayga (laakin marnaba aanan qaadanayo wax ku filan caafimaadka, kobcayo Kirishtaanka), ama waxaan u nimid inaan quudino laakin marnaba ma dhexdhaxaadin iyada waqti dheer oo ku fuillan si loogu helo nafaqada ruuxiga ah ee iyada ka imaaneyso.
Waa muhiim, haddii aadan sameynin caadada barashada joogtada ah iyo xifdinta Erayga Illaah, inaad bilowdid inaad sidaas sameysid. Qaarkood waxay u arkaan caawin buuxdo inay bilaabaan joornaalka. Samey caado aadan kaga tageynin Erayga illaa aad hoos ku qortid wax aad ka heshay. Qaar ka mid ah diiwaanka salaada ee Illaah, adiga oo weydiinayo inuu kugu caawiyo badelida aagaga uu kala hadlay iyaga. Baybalka waa qalabka Ruuxa isticmaalo nolosheena (Efesos 6:17), qeybta muhiimka ah ama ugu weyn ee hubka IllaAH na siiyo si aan ula dagaalno dagaaladeena ruuxa (Efesos 6:12-18).
Isha sadexaad ee ugu muhiimsan ee dagaalkeena ka soo horjeedo dambiga waa salaada. Markale, waa il in Kirishtaanka inta badan siiyo adeega faruurta laakin sameeyo isticmaal liito. Waxaan leennahay kulamada salaada, waqtiyada salaada, iwm, laakin uma isticmaalno salaada isla wadada ee horaanta kaniisada (Falimaha Rasuullada 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3). Bawlos ayaa si ku celcelis ah u sheegay sida uu u dugto kuwa oo hogaamiyo. Illaah wuxuu na siiyay balan cajiib ah ee la xiriiro salaada (Matayos 7:7-11; Luukos 18:1-8; Yooxanaa 6:23-27; 1 Yooxanaa 5:14-15), iyo Bawlos waxaa ku jiro salaada ee mareenkiisa ee diyaarinta dagaalka ruuxa (Efesos 6:18).
Sidee muhiim ah ayay salaada u tahay ka adkaanta dambiga ee nolosheena? Waxaan leenahay erayada Masiixi ee ku socdo Peter ee Beerta Gethsemane, ka hor diidmada Peter. Sida Ciise tukunayay, Peter wuu jiifay. Ciise ayaa kiciyay oo ku dhahay, “Daawo iyo tuko si markaas aaDan ugu dhicin rabitaanka. Ruuxa wuu rabaa, laakin jirka wuu liitaa” (Matayos 26:41). Inaga, sida Peter, waxaan rabnaa inaan sameyno waxa saxda ah laakin mahelayo karti. Waxaan u baahannahay inaan raacno xasuusinta Illaah oo aan ku joogteyno raadintae, joogtey garaacitaanka, joogtey weydiinta—iyo Wuxuu na siinayaa kartida aan u baahannahay (Matayos 7:7). Salaada ma ahan qaab sicir ah. Salaada si fudud ayay u qireysaa xadeynteena gaarka ah iyo awooda aan xadeyneen ee Illaah iyo u laabashadiisa ee kartidaas la sameynayo waxa uu rabo inuu sameeyo, ma ahan waxa aan rabno inaan sameyno (1 Yooxanaa 5:14-15).
Isha labaad ee dagaalkeena lagu qabsanayo dambiga waa kaniisada, raacayaasha aaminayaasha kale. Markii Ciise uu soo diray xirtiisa, wuxuu banaanka u diray labo-ka-labo (Matayos 10:1). Howlgalka ku jiro Falimaha Rasuullada banaanka muusan aadin waqtiga, laakin koox ahaan oo labo ama ka badan. Ciise wuxuu nagu amray inuusan ka deyrin isu geynta nafsadeena oo wada jir ah laakin si loo isticmaalo waqtigaas oo lagu dhiirogelinayo midba midka kale ee jaceylka iyo shaqooyin wanaagsan (Cibraaniyada 10:24). Wuxuu noo sheegay inaan qirano qaladaadkeena ee mid kale (James 5:16). Suugaanta xigmada ee Baybalka Hore, waxaa naloo sheegay in sida birta u qaabeysantahay, marka hal nin midka kale ayuu qaabeeyaa (Maahmaahyadii 27:17). Waxaa jiro kartida lambarada ah (Wacdiyahii 4:11-12).
Kirishtaano badan waxay ogaadaan in lahaanshaha lamaane la xisaabtan leh waxay noqon kartaa faa’ido weyn ee looga adkaanayo dambiyada joogtada ah. Lahaanshaha qof kale ee kula hadli karo adiga, kula dugto, kugu dhiirogeliyo, iyo xitaa canaantaada waa qiyam wanaagsan. Jiribadaada caadi ayay noo tahay dhammaan (1 Korintos 10:13). Lahaanshaha lamaane la xisaabtan leh ama koox la xisaabtan leh waxay na siin karaan garoojada ugu dambeyso ee dhiirogelinta iyo sabab u noqoshada aan u baahannahay inaan uga adkaano xittaa dambiyada joogtada ee ugu badan.
Mararka qaarkood guusha la xiriirto dambiga dhaqso ayuu imaadaa. Waqtiyada qaarkood, guusha si tartiib ah ayay u imaataa. Illaah wuxuu balan qaaday sida aan u isticmaaleyno Illahiisa, Wuxuu si hormar ah u keenayaa isbadel nolosheena ah. Waxaan u samray dadaaladeena looga adkaanayo dambiga sababtoo ah waan ognahay inuu aaminsanyahay Balantiisa.